Myanmar Defence Weapons: ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ လေတပ်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ လေတပ်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း
မြန်မာ့တပ်မတော် (လေ)အား လက်ရှိအခြေအနေထက် တိုးတက်စေလိုသော စိတ်ကူးဆန္ဒများစွာဖြင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ လေတပ်တိုက်လေယာဉ်များအား လေ့လာကြည့်ရာ
အောက်ပါအတိုင်း အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လေ့လာမိပါသည်။
(၅) ဗီယက်နမ်လေတပ် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့်လေတပ်မှာမူ မြန်မာ့လေတပ်ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိရာ ထပ်မံ၍ သီးသန့်မလေ့လာမိတော့ပါ...။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် ယိုးဒယားလေတပ်တွင် ခေတ်မှီတိုက်လေယာဉ်များအား ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားရာ အက်ဖ်-၅ ၊ အက်ဖ်-၁၆ အေ၊ဘီ ၊ ဂရီပင် JAS-၃၉ (ဆွီဒင်ထုတ်) တိုက်လေယာဉ်များကို အဓိကထား အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ပြင် အယ်ဖာ
အမည်ရှိသောအပေါ့စား တိုက်လေယာဉ်တစ်မျိုးကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။
အက်ဖ်-၁၆ အေ၊ဘီ အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်
JAS-39 Gripen တိုက်လေယာဉ်
အက်ဖ်-၁၆ နှင့်ပတ်သက်ရင် မြန်မာလူထု့အတွက် မဆန်းသော်လည်း JAS-39 တိုက်လေယာဉ်မှာမူ မြင်နေကြ ၊ ကြားနေကြ တိုက်လေယာဉ်အမျိုးအစားတစ်ခုတော့ မဟုတ်သေးပေ။
မလေးရှားလေတပ်သည် အနောက်နိုင်ငံများရှိ လေတပ်တိုက်လေယာဉ်များအပြင် ရုရှားလေတပ်၏ တိုက်လေယာဉ်များပါ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနေသော လေတပ်မတော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်လေတပ်၏ အားထားရသော အက်ဖ်၊အေ-၁၈ (F/A-18 Hornet) ကဲ့သို့သော တိုက်လေယာဉ်များအပြင် ရုရှား၏ မစ်-၂၉အန် (MiG-29N) နှင့် ဆူခွိုင်း-၃၀ အမ်အေအမ် (SU-30 MKM) များကိုအသုံးပြုနေပါသည်။
အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉အန် (မစ်-၂၉အန်) တိုက်လေယာဉ်
ဆူခွိုင်း-၃၀ အမ်ကေအမ် တိုက်လေယာဉ်
SU-30MKM တိုက်လေယာဉ် ၁၈စင်းကို ၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်းတွင် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး နောက်ထပ် အစီးရေ (၁၈)စင်း ထပ်မံမှာယူထားပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ကျွှန်းနိုင်ငံငယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ကြည်းတပ်ဖွဲ့ထက် လေတပ်နှင့် ရေတပ်ကို အဓိကထား တိုးချဲ့လျက်ရှိပြီး စင်ကာပူ၏လေတပ်မတော်သည် နိုင်ငံပင်ငယ်စေကာမူ စွမ်းရည်ထက်မြက်သော တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံထုတ် စစ်လက်နက်များအဓိကတပ်ဆင်ရာ လေတပ်တွင်လည်း အမေရိကန်ထုတ် အက်ဖ်-၁၅အက်စ်ဂျီ (F-15SG) ၊ အက်ဖ်-၁၆စီဂျေ (F-16CJ)- (F-16DJ) စသည်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော တိုက်လေယာဉ်များ တပ်ဆင်အသုံးပြုနေပါသည်။
အက်ဖ်-၁၆ ဒီဂျေ တိုက်လေယာဉ်
အက်ဖ်-၁၆ တိုက်လေယာဉ်မျိုးကွဲများအနက် အက်ဖ်-၁၆ဒီဂျေ တိုက်လေယာဉ်သည် ခေတ်မှီစနစ်များထပ်မံပေါင်းစပ်ထားသော တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။
လေယာဉ်အတွက် ဆီလောင်ကန်ထပ်မံပေါင်းစပ်ပေးထားခြင်းကလည်း စစ်ဆင်ရေးကိရိယာအား ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပါသည်။
မလေးရှားလေတပ်နှင့်အပြိုင်လေတပ်အင်အားတိုးချဲ့သော နိုင်ငံမှာ အင်ဒိုနီးရှားလေတပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့်စာလျှင် လေတပ်အင်အားအနည်းငယ်လျှော့နေသေးသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားလေတပ်တွင်လည်း အမေရိကန်ထုတ် အက်ဖ်-၅အီး နှင့် အက်ဖ်-၁၆ တိုက်လေယာဉ်များ အပြင် ရုရှား၏ နာမည်ကျော် ဆူခွိုင်း-၂၇ အက်စ်ကေ နှင့် ဆူခွိုင်း-၃၀ အမ်ကေ၂ (SU-30 MK2) တိုက်လေယာဉ်များပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။
ဆူခွိုင်း-၂၇ အက်စ်ကေ တိုက်လေယာဉ်
ဆူခွိုင်း-၃၀ အမ်ကေ၂ တိုက်လေယာဉ်
SU-27SK နှင့် SU-30MK2 တိုက်လေယာဉ်တွေဟာ ခွဲခြားမရလောက်အောင်ကို တူနေပါတယ်... ကွဲပြားပုံလေးကတော့- SU-27 တွင် ပိုင်းလော့ (၁) ဦးတည်းသာဖြစ်ပြီး SU-30MK2 တွင် ပိုင်းလော့ (၂)ဦး မောင်းနှင်ပါသည်။
ဗီယက်နမ်လေတပ်သည် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်နည်းတူ ရုရှားထုတ် တိုက်လေယဉ်များကိုသာ အဓိကအသုံးပြုသော လေတပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အေးကာလ၏ ခေတ်မှီတိုက်လေယာဉ်မျိုးပေါင်းများစွာ နှင့်အတူ ခေတ်မှီတိုက်လေယာဉ်မျိုးဖြစ်သည့် ဆူခွိုင်း-၂၇ ယူဘီ (SU-27UB) နှင့်ဆူခွိုင်း-၃၀ အမ်ကေ၂ဗီ (SU-30MK2V) တိုက်လေယာဉ်များကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။
ဆူခွိုင်း-၂၇ ယူဘီ တိုက်လေယာဉ်
ဆူခွိုင်း-၃၀ အမ်ကေ၂ဗီ တိုက်လေယာဉ်
ဗီယက်နမ်လေတပ်သည် အမ်အိုင်ဂျီ နှင့် ဆူခွိုင်း တိုက်လေယာဉ်မျိုးကွဲများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားရာ လေတပ်အင်အားတောင့်တင်းသော နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါဒေသတွင်း ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ လေတပ်များကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် တွေ့ရသော အချက်တစ်ခုမှာ ခရီးဝေးပျံသန်းတိုက်ခိုက်နိုင်သော တိုက်လေယာဉ်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလာကြသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်ထုတ် ဖြစ်စေ ၊ ရုရှားထုတ် ဖြစ်စေကာမူ နောက်ပိုင်းခေတ်မှီသည့်တိုက်လေယာဉ်များကို လေ့လာကြည့်ပါက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် မည်သည့်ဘက်က သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မှားသည်ဟူ၍ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် (လေ)ရှိ အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း
မြန်မာ့တပ်မတော် (လေ)တွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ အက်စ်အီး (MiG-29SE) တိုက်လေယာဉ်များသည် အစွမ်းထက်မြတ်ဆုံးသော တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ရာ တာဝေးတိုက်ခိုက်မောင်းနှင်နိုင်သော ခေတ်မှီနည်းပညာများထပ်မံပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်သည်။ထို့ပြင် တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးတည်းမှ ပစ်မှတ် (၄)ခုကို တပြိုင်တည်းချိန်ရွှယ်ပစ်ခတ်နိုင်သော စနစ်များတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော် (လေ)၏ နောင်တွင်ဖြစ်လာလတံ္တသော မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်မှာမူ မည်သည့် ခေတ်မှီတိုက်လေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်လာမည်ဆိုသည်ကို မသိရသေးပေ။ ကျွှန်တော်တစ်ဦးတည်း၏ အမြင်ဖြင့်ပြောရမည်ဆိုပါက SU-30 တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်လာစေချင်မိပါတော့သည်ခင်ဗျာ.....။
Posted by MM at 10:54 AM
sanaythar August 2, 2012 at 8:59 PM
" ဘင်္ဂလားဒေ့်လေတပ်မှာမူ မြန်မာ့လေတပ်ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိရာ ထပ်မံ၍ သီးသန့်မလေ့လာမိတော့ပါ...။ "
ကိုmm ရဲ့ အဲဒီစာသားကို တော်တော်ကြိုက်သွားပြီ။
hein August 2, 2012 at 11:05 PM
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ရေပိုင်နက် တော်တော် များများရှိနေတဲ့..india ocean က သူ့ ရဲ့ စူပါ ပါဝါနိုင်ငံ အသစ်ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်..ဒါကို ခု စူပါ ပါဝါနိုင်ငံကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့.. အမေရိကန်..တရုတ်...india တို့ ကလည်းသိပါတယ်ခင်ဗျာ.. အမေရိကန်ဆို ရင် သူရဲ့ ရေတပ်ကို india ocean ကိုဦးဖို့ အတွက် အရှေ့ တောင် အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ အများအပြားလုပ်နေပါတယ်..ဒီပူးပေါင်းမှုတွေဟာ...တရုတ်ကို ထိန်းဖို့ ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ တရုတ်ရဲ့ ပတ်လည်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ ခံတပ်တွေကိုလို့ ပြောလိုရတဲ့(မြောက်ကိုရီးယားကလွဲရင်) မဟာမိတ်တွေတန်းစီနေတာတွေ့ ရမှာပါ..တရုတ်ကလည်း.ခု ပစီဖိတ် ocean ထဲမှာ..အာဏာစပြနေပြီ..သူလည်း india ocean ကို အရင်တည်းက ချိန်နေတာပါ..ရခိုင်မှာ တရုတ်ရေတပ်ဆောက်ဖို့ နဲ့ တရုတ်သင်းဘောတွေ irrawaddy မြစ်ထဲမှာ သွားနိုင်ဖို့ စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးခဲ့ဖူးပါတယ်(မရခဲ့ဘူး) ပြီးတော့ india အာ india ocean က သူ အသက်ပါ.. အာရပ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ(အဓိက ရေနံ)အတွက် ဒီocean ကိုအားထားနေရပါတယ်...ဒီ ocean ထဲမှာ စူပါပါဝါ ဖြစ်လာမယ့်နိုင်ငံဟာ အရှေ့ တောင်အာရှကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်ပြီး..ကမ္ဘာ ကုန်သွယ်မှုတွေရဲ့ တော်တော်များများကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..အဲတော့.ဒီocean ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ ရေပိုင်နက်တော်တော်များများရှိနေပါတယ်..အဲဒီတော့..ထင်ရှားသိသာလာတာက.မြန်မာတွေ ရေတပ်ကို တိုးချဲ့ သင့်နေပါတယ်..မိမိ တို့ ရေ ပိုင်နက်တင်မဟုတ်..ပင်လယ်ပြာ အထိ(india ocean)ခပ်နက်နက် အထိ အာဏာ ဖြန့် ထားနိုင်မယ့်ရေတပ် ဆောက်ဖို့ လို ပါတယ်..ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ပါ..ကျွန်တော် အထင်ပြောရရင် မြန်မာ ဟာ.india ocean ရဲ့ စူပါပါ ၀ါ ဖြစ်လာဖို့ အထိမှန်းထားသင့်ပါတယ်..အချိန်တို အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ..ခေတ်မှီဒုံးတပ် စစ်သင်းဘောတွေကို တိုးမြှင့်ထားသင့်တယ်..ပြီးတော့ ရေငုတ်သင်းဘောကို စတင်စဉ်းစားသင့်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်..ပြီးတော့ လေယာဉ်တင်သဘော အတွက် စီမံကိန်းချထားချစေလိုပါတယ်..ခု .ရေတပ်ဖွဲ့ စည်းပုံကိုပြောင်းလဲဖွဲ့ စည်းသင့်နေပါပြီ..စစ်သင်းဘောတွေနဲ့ အတူ လိုက်ပါစစ်ဆင်နိုင်မယ့် ရဟတ်ယာဉ်တွေလို လာပြီ.. အထူးသဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက် ခေတ်မှီရေဒါစနစ်တွေကိုဖြန့် ထားပြီး..ခေတ်မှီကင်းထောက်လေယာဉ်တွေဟာ..ရေတပ်ဖွဲ့ စည်းပုံထဲမှာ ပါဝင်လာသင့်တယ်..အထူးသဖြင့် တိုးတက်ဖို့ က ဒုံးတွေပါ...မြန်မာ့ စစ် သင်းဘောတွေသည်..တာလတ်ပစ် ဒုံးတွေအထိ တင်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်...ကျွန်တော့်အထင် တပ်မတော်က ခု ရေတပ်ကို အလွန်လျှင်မြန်စွာ တိုးချဲ့ လာနေပါတယ်..လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာကို ဒါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်..မြန်မာ့ရေတပ်မှာ ဖရီးဂိတ် အစင်3း0 .cruiser 20 ရေငုတ် သင်းဘော 10 စင်းလောက်နဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တင် သဘော တစ်စင်း..ကော့သောင်း ပတ်လည်က မြန်မာပိုင်ကျွန်းတွေမှာ..ရေကြောင်းချီတပ်မတွေ..တာလတ်ပစ်ဒုံးပျံတွေနဲ့ ရေဒါစနစ်တွေပါဝင်နိုင်မယ့်.ရေတပ်စခန်း 10 ခုလောက် တည်ပြီးရင်တော့ ကျိန်းသေပြောရဲတယ်..မြန်မာဟာ india ocean ရဲ့ သခင်ပဲ.india ocean ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကုန်သွယ်သင်းဘော်တွေနဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်လောက်ပါပြီ..ဒီလို တောင့်တင်းတဲ့ ရေတပ် တစ်ခု india ocean ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အတွက် အမေရိကန် သည်တော်ရုံ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဝင်မလာနိုင်ပါ..၀င်လာသည်ဆိုပေအုန်းတော့..ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မဟာမိတ်အနေနဲ့ ပဲဝင်လာတော့မှာ ကျိန်းသေပါတယ်..ဒါဆို မြန်မာရေတပ်သည်..အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီးတစ်ခုနဲ့ ပူးတွဲနေတဲ့အတွက်..ကမ္ဘာ သြဇာ ကတော် အများကြီးတက်လာမှာပါ..အရှေ့ တောင်အာရှကို လည်းထိန်းထားနိုင်ပါမယ်.ဘင်းဂလားကိုတော့ တိတ်နေအောင်ကို လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်..အဲဒီအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကလည်း india ocean ထဲမှာ အခုအများကြီးရှိနေသလို အဲဒီအချိန်မှာ အများကြီးပိုလာနိုင်ပါတယ်..ခု အဓိက လုပ်ဆောင်ဖို့ က တော့ ရေတပ်ကို အထူး အထူးတို့ ချဲ့ ဖို့ ပါပဲ..မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရေကြောင်းချီတပ် တွေပိုင်ထားနိုင်ရင် မြန်မာတွေ ဘယ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို မှ ဂရုစိုက်နေစရာမလိုတော့ပါခင်ဗျာ.
MI 35 August 5, 2012 at 1:32 AM
ခက်တာက မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက (ရှေးဘုရင်တွေအပါအ၀င်)၊ ရေတပ်ကိုစိတ်မ၀င်စားပါဘူး.. India က လူမျိုးသာ ဆင်းရဲတာ India Ocean ကို ထိန်းဖို့အင်္ဂလန်လို ရေတပ်ကြီးပဲ ချဲ့ နေတာဗျ
sanaythar August 3, 2012 at 12:15 AM
ကို hein ဆွေးနွေးတာ ကောင်းလိုက်တာခင်ဗျ။ မျှော်လင့်ချက်တော့ နည်းနည်းကြီးနေတာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် မြင့်မြင့်မျှော်လင့်တာကို ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်။ အခုရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်အသစ်နှစ်ခုအပါအ၀င် ခြောက်ခုလားပဲ။ ရှေ့တန်းကျွန်းစခန်းတွေလည်းအသစ်ထပ်ဖွဲ့ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလောက်သေးဘူး၊ မလွှမ်းခြုံနိုင်သေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကျွန်တော်တို့အပြည့်အ၀ မကာကွယ်နိုင်သေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့သယံဇာတတွေ ဆုံးရှုံးနေတုန်းပါပဲ။ အဲဒါတွေကိုလည်း စာရင်းဇယားကောက်ယူနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ ထိုင်းမှာ ငါးတွေပေါလို့မေးကြည့်တော့ သူတို့ဆီမှာ ဖမ်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့။ ဟိုး...ကရတာပါတဲ့။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဗျာ။ ကောင်းရော။ သူတို့ငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေ အများကြီးပဲ၊ တရားဝင်ရော၊ တရားမ၀င်တ၀င်ရော။ အားလုံးရေဒါတွေ ကျွန်တော်တို့ စစ်သင်္ဘောတွေလောက်ကောင်းကြတယ်။ မြန်ကြတယ်။ ဦးပိုင်းမှာ သံမဏိအချွန်ကွပ်ထားတယ်။ အနီးကပ်လာရင် ၀င်ဆောင့်မှာနော်။ အဲလိုမျိုးတဲ့ဗျာ။ ထားပါတော့ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်မှာတော့ အခုထိ Salience ရေမျှော၊ Darkness လုပ်နေတုန်းပဲ။ အချိန်ပြည့်ပင်လယ်ပြင်မှာမရှိဘူး။ တည်နေရာအမှန်မသိဘူး။ ရေပုံပေါ်မှာပဲ သင်္ဘောရှိတယ်။ ဒါတွေမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ လူကြီးတွေ၊ လူလတ်တွေ ကြပ်မတ်သင့်ပါပြီ။ ရာထူးကြီးလာ-စည်းစိမ်ကြီးလာတာမဖြစ်ပါစေနဲ့တော့ဗျာ။ တစ်ခါတစ်ခါအားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ပါ။ ရာထူးကြီးရင် အလုပ်ပိုလုပ်ရပါမယ်။ အချိန်တိုင်းမှာ တပ်မတော်တိုးတက်ဖို့၊ ဘာလုပ်မလဲ၊ ဘာစစ်မလဲ၊ ဘယ်သွားမလဲ။ စဉ်းစားနေရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာက အဆင့်မှီ တပ်မတော်တွေလို တိုင်းပြည်ကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းအောင် အပြစ်ကင်းကင်းကာကွယ်ဖို့လိုနေပါပြီ။ အခုရခိုင်မှာ အချိန်ပြည့်ကင်းလှည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ကျသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် မဲ့သွားပြီးပါပြီ။ စိတ်ဓါတ်တွေ၊ ဘ၀တွေ အားလုံးထိုးကျသွားပါပြီ၊ သူများပေးစာ ကမ်းစာစားရတဲ့ဘ၀တွေဖြစ်သွားပြီးပါပြီ။ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ စုထိုင်နေကြရင်း သူတို့ကိုသနားစရာသတ္တ၀ါတွေလို ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ၊ I Phone တစ်ကားကားနဲ့ NGO,INGO တွေ၊ မြို့ကြီးသားတွေကို ရီဝေမှိုင်းမှုန်တဲ့ မျက်လုံးများနဲ့ ၀မ်းနည်းစွာကြည့်နေရပါပြီ။ ထားပါတော့ခင်ဗျာ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ တပ်မတော်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာသာ တာဝန်ရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လူ့အသိုက်အ၀န်းအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတာပါ။ အမှန်မှာက အရင်ကတည်းက ပိုက်စိပ်တိုက်ပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရမှာပါ။ အရင်ကတည်းက ကင်းလှည့်နေခဲ့ရမှာပါ။ တစ်စီးလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ အဟန့်ပေါ့။ အရင်က စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး တပ်စစ်ပုံကို စစ်ရုံးအရပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ဦးပြောပြလို့ကြားဖူးတယ်။ လူကြီးနင်းဝင်လာရမဲ့လမ်းကမလာဘဲ၊ ဟိုးအနောက် ဘားတိုက်ဖက်က၀င်ပြီး ရဲဘော်တွေအတွက်ချက်ထားတဲ့ ပဲဟင်းရေ(ရည်)တွေဇွန်းကြီးနဲ့ ၀င်မြည်းသတဲ့၊ မကောင်းတော့ ဆူလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာတဲ့။ အဲလိုအရာရှိကြီးမျိုးတွေ အများကြီးလိုနေပါပြီ။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တောင်မှ အခုနှစ်ပိုင်းတော်တော်လေး အဆင့်မြင့်လာပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ GPS တွေ၊ဘာတွေတပ်ထားပြီ။ ဌာနချုပ်ဝင်းထဲမှာလည်း ရေသယ်ယာဉ်အကြီးစားတွေ လှမှလှဗျာ။ ဆူးလေမှာလည်း မော်တော်ဘုတ်လိုမျိုးကားတောင်တွေ့မိသေးတယ်။ တပ်မတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ ဒီထက် စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ ပစ္စည်းသစ်များတိုးတက်ဖို့လိုနေပါပြီ။ မဆိုင်တာတွေလျှောက်ရေးမိလို့ ကိုmm နဲ့၊ ညီအစ်ကိုများကို တောင်းပန်ပါတယ်။
Tun Tun Ko August 4, 2012 at 4:19 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့Commentလေးပါလားကွယ်၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏ သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေပါမည်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့စေတနာခံစားချက်တွေမှန်းသိသာလိုက် တာကွယ်၊ မောင်ရင်သာတပ်မတော်သားတစ်ယောက်ဆိုရင် ကာချုပ်ဖြစ်ပါစေလို့ရင်ထဲအသည်းထဲက ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ငါဒို့နိုင်ငံရဲ့ ၀ဠ်ကျွေးလားတော့မသိဘူး၊ အရည်အချင်းမြင့်မားပြီး နှလုံးသားလှ
တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကြတော့ အသေစောတတ်ကြတယ်လို့ကွာ၊ Ko Hein ကိုလဲတစ်ဆက်ထဲ
ပြောခြင်ပါတယ်၊ မောင်ရင်တယ်လောဘကြီးသကိုးကွဲ့ ဒါပေမဲ့ ဒါဟုတ်တာပေါ့ကွ အကုန်ရချင်ရ မရရင်ဘာမှမလိုချင်ဘူး ဆိုသလိုပေါ့ကွယ်၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာ မျက်နှာငယ်နေရတဲ့
နိုင်ငံသားတွေကို (ကျုပ်အပါအ၀င်) မျက်နှာမော့စေချင်လှပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အသုံးပြုမယ့်လူတွေ အရည်အချင်းမရှိရင် ဘာမှသုံးရမှာမဟုတ်ဘူး
မောင်ရင်ရေ။ အရပ်သားတွေ Business လောကမှာပြောနေကြသလို Capacity building
ကျုပ်တို့ တပ်မတော်ထဲမှာလဲ လိုနေပြီ အဲဒါက ပထမဦးစားပေးပါ။ အရည်အသွေးမြှင့်ဘို့ အတွက် အရည်အသွေးမြှင့်ပေးရမယ့်သူတွေ အမြှင့်ခံကြမယ့်သူတွေ ထမင်းငတ်မနေကြဘို့ လဲ အရေးကြီး
ပြန်တာဘဲ အဲဒီနေရာမှာ ကြတော့ Business လောကမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြတဲ့ Human Resource Development(HRD)တို့Human Resource Management(HRM)
တို့ လိုလာတာပေါ့ကွာ တို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို MBA သင်တန်းတက်ခိုင်းရင်မကောင်းဘူးလား ဒါပေမဲ့ သူတို့ လဲ NDC မှာ ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ သီအိုရီ တွေ သင်ခဲ့ကြမှာပါ Applicable မဖြစ်တာကတော့ ခုနကပြောသလို တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ ပါဘဲ။ ကဲ ဒီလောက်ပါဘဲလေ ဒီ Blog ကိုရေးတဲ့ Ko MM နဲ့ ညီ အစ်ကို အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ တပ်မတော် ကြီး ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းလာစေချင်လို့ ပါ။ အရင်ကလို ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်လွန်း လို့ပါ၊ တို့ ငယ်ငယ်ကလို ရွာတစ်ရွာ ၀င်လိုက်တာနဲ့ တပ်မတော်လာပြီကွလို့ ခရီးဦး အကြို ခံစေချင် လွန်းလို့ ပါ။
generals August 6, 2012 at 7:46 PM
အ ထက်ကအကို တွေ ကွန့်မန့် ကိုဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင်ကျ မိပါတယ် ကျနော်တို့ တပ်မတော်မှာ တာဝန်ကိုသိပြီး အမျိုးကို နှလုံးသားထဲက ချစ်မဲ့ ပညာတတ် စစ်သား စစ်စစ်ကြီးတွေလိုအပ်နေပါပြီခသ်ဗျာ
မျိုးမဟော် September 22, 2012 at 12:26 PM
HRM ကနေ မိုတီဗေးရှင်းလုပ်နိုင်စွမ်းတစ်ခုကို သုံးရင်တောင် မြန်မာ့တပ်မတော် ဒီထက်မက အခြေအနေ ကောင်းလာမှာပါ....
htinaung eikyaw September 27, 2012 at 10:17 AM
မြန်မာ့ရေတပ်မှာ ဖရီးဂိတ်တွေပိုင်နေပြီ ဆက်လဲ တည်ဆောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကောင်ကြီး တွေမှာ ဘယ်နိုင်ငံထုတ် ဘယ်လိုလက်နက်မျိုးတွေ နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်ထားလဲသိချင် ပါတယ် ကိုMMခင်ဗျား။ ရေငုပ်သင်္ဘောအုပ်ဖွဲ့ရော ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံရှိနေပြီလား? သိသူများ မျှဝေ ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
တပ်မတော် (ရေ)၏ တည်ဆောက်နေဆဲ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်များ
Pechora 2M ခေါ် လေယာဉ်ပစ်ဒုံးစနစ်
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ လေတပ်များအကြောင်း တစေ့တစောင...